Nahoana no Misy Anarana Tsy Lazain’ny Baiboly? | Valim-panontaniana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Nzema Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Nahoana no Tsy Lazain’ny Baiboly ny Anarana Sasany?
Nantsoina fotsiny hoe Ingahy ny lehilahy iray resahina ao amin’ny bokin’i Rota, izay tsy nety nanao ny adidiny voalazan’ny Lalàn’i Mosesy. (Rota 4:1-12) Midika ve izany fa ratsy toetra toa azy na tsy misy dikany daholo izay olona na anjely tsy voalaza anarana ao amin’ny Baiboly?
Tsia. Misy ohatra hafa ity. Nirahin’i Jesosy hankany “an-tanàna ho any amin-dRanona” ny mpianany, mba hanomana ny Paska farany hiarahany amin’izy ireo. (Matio 26:18) Ratsy toetra na tsy misy dikany ve io lehilahy io matoa tsy nolazaina ny anarany? Tsy izany mihitsy. Azo inoana fa mpianatr’i Jesosy izy io. Tsy tena nilaina tao amin’ilay tantara anefa ny anarany, ka tsy nolazaina.
Ankoatra izany, dia misy anaran’olona ratsy fanahy maro ao amin’ny Baiboly. Maro koa ny olona tsy nivadika nefa tsy nolazainy ny anarany. Be mpahalala, ohatra, i Eva, ilay vehivavy voalohany. Tia tena sy tsy nankatò anefa izy ka nitarika an’i Adama hanota, ary nijinja ny vokatr’izany isika rehetra. (Romanina 5:12) Tsy resahin’ny Soratra Masina kosa ny anaran’ny vadin’i Noa. Tena ankasitrahantsika anefa izy satria tsy tia tena sy nankatò, ka nanampy ny vadiny hanao an’ilay asa namonjy aina. Tsy hoe tsy nisy dikany àry izy na hoe tsy nankasitrahan’i Jehovah matoa tsy nolazaina ny anarany.
Misy olon-kafa tsy voalaza anarana koa ao amin’ny Baiboly, nefa nandray anjara be tamin’ny fanatanterahana ny fikasan’i Jehovah ary be herim-po mihitsy aza. Eritrereto ilay zazavavy israelita nanompo tao an-tranon’i Namàna, filohan’ny tafika syrianina. Sahy niresaka tamin’ny vadin’i Namàna momba ny mpaminanin’i Jehovah tany Israely izy. Izany no nahatonga an’i Namàna ho sitrana tamin’ny fomba mahagaga. (2 Mpanjaka 5:1-14) Tena nanam-pinoana koa ny zanakavavin’ilay mpitsara israelita atao hoe Jefta. Vonona ny tsy hanambady sy tsy hiteraka izy, mba hanatanterahana ny voadin-drainy. (Mpitsara 11:30-40) Salamo 40 mahery koa no tsy fantatra izay nanoratra azy. Nisy koa mpaminany namita iraka niavaka nefa tsy voalaza anarana.—1 Mpanjaka 20:37-43.
Mbola miavaka noho izany aza ny ohatra nomen’ireo anjely tsy nivadika. Misy an-jatony tapitrisa izy ireo nefa anaran’anjely roa monja no ao amin’ny Baiboly, dia i Gabriela sy Mikaela. (Daniela 7:10; Lioka 1:19; Joda 9) Tsy nolazaina kosa ny anaran’ny anjely hafa. Nanontanian’i Manoa, rain’i Samsona, ohatra, ny anjely iray hoe: “Iza moa no anaranao, mba hanomezanay voninahitra anao rehefa tanteraka ny teninao?” Hoy anefa ilay anjely: “Fa maninona ianao no manontany ny anarako?” Nanetry tena izy ka tsy nety nandray ny voninahitra tokony ho an’Andriamanitra irery ihany.—Mpitsara 13:17, 18.
Tsy hazavain’ny Baiboly foana hoe nahoana no nolazaina ny anaran’ny olona sy anjely sasany ary tsy nolazaina ny an’ny hafa. Tsara hotahafina anefa ireny mpanompon’Andriamanitra tsy nivadika ireny, satria tsy nitady laza na voninahitra.